ရေတို, အလတ်နှင့်အရှည်လျားဆံပင်အတွက်မိန်းမတို့အဘို့ဆုံးဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံတွေ 2018
ဆံပင်ပုံစံတွေ 2018 - နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်စတိုင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
2018 ခုနှစ်တွင်ခေတ်မှီဆံပင်ပုံစံတွေဟာ created image ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဖော်ပြမျက်နှာ features တွေအလေးပေးဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်။ ဆံပင်၏အကူအညီနှင့်အတူအယူခံအလေးပေးနှင့်ပုံရိပ်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းများနှင့်အမှတ်တရဖြစ်စေခြင်းငှါ, အားနည်းချက်တွေကိုပုံပန်းသဏ္ဌာန်, မျက်နှာ၏မှန်ကန်သောပုံသဏ္ဍာန်ဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဆံပင်ပုံစံတွေ 2018 - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
stylist အနည်းငယ်ပေါ့ဆမှု, သဘာဝနှင့်လွယ်ကူခြင်းအဘို့အ 2018 အတွက်ဖက်ရှင်ယုံကြည်ကြသည်။ ဒါဟာအပြည့်အဝအောက်ပါအတိုင်းအဖွစျဖျောပွနိုငျသောသူတို့တွင်လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းဆံပင်ပုံစံတွေ 2018, အတည်ပြု:
အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောတင်းကျပ်ထုပ်နှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဆံပင်မရှိတော့တဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့အနည်းငယ် tousled ဆံပင်ကောက်ကောက်နှင့်တင်းကျပ်စွာပုတီးဖြင့်အစားထိုးခဲ့ကြသည် ကျစ် ။
တဦးတည်းအခြမ်းမှအထူ Bang 2018 ဘို့ created တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောတကြလိမ့်မည်။ ကနှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်အလွန်သဟဇာတကြည့်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်ဆံပင် Bob, ရွေးချယ်ဖို့သူမထိုက်တန်သည်။
အဆိုပါ elongated အ strands တွင်ရှုပ်ထွေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုကောင်းသောကြည့်ရှုမည်။ ဥပမာ, လည်ပင်း၏ nape ဖို့နဖူးကနေ weaved ထားတဲ့မရနိုင်ပါဘူးကျစ်, ရှိနိုင်ပါသည်။ မိန်းကလေးများကွဲပြားခြားနားသောကျစ်နှင့်ပုတီးနှင့်အတူရှုပ်ထွေး၏အခြားနည်းလမ်းများမှဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
အလတ်စားအရှည်၏ဆံပင်တွင်ပွို curly ဆံပင်, မထိုက်မတန်နှင့်ထူးချွန်ဆံပင်ကောက်ကောက်တရံနှင့်အတူ 2018 ခုနှစ်တွင်ကောက်ယူဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံတွေကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
လူကြိုက်အများဆုံးခေါင်းဖီး၏တဦးတည်း၏အတိုအရှည်အဘို့ဖြည့်စွက်ရမည်အကြောင်းဒါမှမဟုတ်မပါဘဲဖြစ် chelochkoy ရသောတစ်ဦး "bean ကို" ဖြစ်လိမ့်မည်။
ရှည်သောဆံပင် 2018 ဘို့ခေတ်မှီဆံပင်ပုံစံတွေ
Unlimited စိတ်ကူးစိတ်သန်း, သင်သည်ရှည်သောဆံပင် 2018 ဘို့ဆံပင်ပုံစံတွေကဤခေတ်ရေစီးကြောင်းမှတ်သားစေခြင်းငှါဖန်တီးပြသနိုင်သည်
သူတို့ကိုအထူးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်များအတွက် Long ကဆံပင်ကောက်ကောက်လှပသောကြည့်ရှုရန်။ အကြီးအရှည်မှာကြွေးမြီပမာဏစဉ်ဆက်မပြတ် bouffant ဆံပင်ကောက်ကောက်နှုနျးဖို့မထို့ကြောင့်ကျင်းပမပါနဲ့လှလှပပထားကြ၏, သင်က grade ဆံပင်ညှပ်ဘို့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သောတစ်ခု option ကို 2018 ခုနှစ်တွင်လူကြိုက်များကြလိမ့်မည်နှင့်၎င်း၏ပိုင်ရှင်၏သဘာဝအကျက်သရေ add ပါလိမ့်မယ်။
ရှည်သောဆံပင်ရုံရှေ့တွင်ဖြတ်ခံရနိုင်ပြီးတစ်ဦးလို့ခေါ်ကိုဖန်တီးရန် "ဟုအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏မြိတ်။ " ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် "အဆငျ့ဆငျ့" တစ်ခုလုံးကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အရှည်ကျော်ကျန်သေးသည်။
ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုရေခဲပြင်ဒိုးပစ်သံသို့မဟုတ် curlers သုံးပြီးဖန်တီးနိုင် curly သော့ခလောက်သုံးပြီးတင်သောလိမ့်မည်။
သူတို့တစ်တွေမျက်နှာရှုမြင်သုံးသပ်ကြဒါကြောင့်ဆံပင်၏ strands, ဘေးထွက်မှ combed, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်ထားရှိနိုင်ပါသည်။
အပြည့်အဝဖော်ပြနိုင်ဖန်ဆင်းခြင်းအရာ၏ရှုပ်ထွေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုများဖြစ်ကြသည် သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း ။
2018 အထုပ်များနှင့်မြင့်မားသောနေရာချအမြီးရှာဖွေနေခေတ်မှီ updo ကောင်းသော။
uncool သို့မဟုတ်ထိထိရောက်ရောက်သော့ခလောက်ထားကြ၏အားဖြင့်ကောင်းစွာတိုတောင်း Bang ကိုက်ညီနေကြသည်။
ဖက်ရှင်အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဆံပင်ပုံစံတွေ 2018 အလတ်စားဆံပင်
အမြိုးသမီးမြားအကြားအလွန်ရေပန်းစား 2018 ခုနှစ်အလယ်အလတ်ဆံပင်အဘို့အ hairstyles, သူတို့ကစမ်းသပ်နိုင်ပါသည်, အလွန်သတိထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ပါဘူး။ ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်လက်တည်ရှိရန်, များစွာသောမိန်းမနေသောအကြားတစ်ဦးကြော့ဆံပင်နှုနျး:
နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်အလင်းလှိုင်းများပြန့်နှံ့ရာ "Cascade" တို့,
စုံလင်သောဂျီဩမေတြီ silhouette နှင့်အတူ "ရင်ပြင်";
တချို့က stylist အတိုင်းဤစမ်းသပ်မှုသုံးပါ ဦးခေါင်း၏ရိတ်ဘုရားကျောင်းသို့မဟုတ်နောက်ကျော မူရင်းဒီဇိုင်းများအတွက်။ ဆံပင်တက်သို့မဟုတ်တစ်ခုသောနေရာ၌ combed, အရိတ်အဘို့ကိုကြည့်ရှုဘို့အဖွင့်, ဒါမှမဟုတ်ပြပ်, ဣတ္နှင့်ကြော့ရှင်းများ၏ပုံရိပ်ကိုအောင်နိုင်တယ်,
ဆံပင်၏ဦးခေါင်းအပိုဆောင်းအသံအတိုးအကျယ်နှင့်သိပ်သည်းဆဖန်တီးချင်သောသူတို့အဘို့ option ကို - တစ်ဦး elongated "Bob" ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ multi-အလွှာဆံပင်ပုံစံတွေ 2018 ကိုဖန်တီးနိုင်, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုတစ်အချိုးမညီကြည့်ပေးစေခြင်းငှါမသာ။ ဒါကသော့ခလောက်အကြားခြားနားချက်အားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် - နောက်ကျောမှာတိုတောင်းဖြစ်မည်, ရှေ့ quad ရှည်မျောမျော။
တိုတောင်းသောဆံပင် 2018 ဘို့ဆံပင်ပုံစံတွေ
ဣတ္နှင့်ကြော့ရှင်းများနှင့်အတိုဆံပင်ပုံစံတွေ 2018 ပါပြီ, သူတို့ကလူတစ်ဦး၏တစ်ဦးအချို့သောအမျိုးအစားနှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေ fit ။ သူတို့တွင်ထိုကဲ့သို့သောမူကွဲ designated နိုင်ပါတယ်:
2018 ခုနှစ်တွင်မူထူးခြားတဲ့နည်းလမ်း occipital နှင့်ဦးခေါင်းယာယီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခုတ်ဖြတ်နေသည်နှင့်ထိပ်ဆုံးမထိကြဘူးဘယ်မှာဂျီဩမေတြီပုံစံမျိုးစုံနှင့်အတူအတိုညှပ်ဖန်တီးကူညီပေးပါမည်။
သင်ပင်လူကြိုက်များ၏အထွတ်အထိပ်မှာကြောင်း caramel သို့မဟုတ် Bandi ၏အရောင် 2018 ခုနှစ်တွင်သက်ရောက်စေလိမ့်မည်ရှိရာရှည်လျားသောမြိတ်, ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
"Bob" ဆိုပြုပြင်မွမ်းမံများအတွက်လာမည့်နှစ်တွင်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည်, သူကတိုတောင်းတဲ့သို့မဟုတ်ရှည်လျား Bang ရဲ့ထို့အပြင်အတူ curly, ဖြောင့်စေနိုင်ပါတယ်။
disheveled သော့ခလောက်ထိပ်ပေါ်မှာရှိနေဆဲ, နှင့်လုံးဝရိတ်၏ကျန်ရှိရာ, စတိုင် "Pixie" ၏ထွက်မသွားပါစေနဲ့။
အတွက်စုတ်ပြဲဆံပင်ပုံစံတွေ 2018 င့်ဂီတစတိုင်လ် နုပျိုနိုင်, သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဖြောင့်ခြင်းနှင့် curly မူကွဲအတွက်အရသာကြည့်ရှုပါ။
တစ်ဦးသင့်လျော်သောဆံပင် 2018 ရွေးဖို့ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှအောက်မှာနှင့်ဆံပင်ရဲ့အရှည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောမျက်နှာ၏ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် parameters များကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ် tsvetotip အသွင်အပြင် , သဘာဝသို့မဟုတ်ဆေးဆိုးအရောင်နဲ့သိပ်သည်းဆ။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောမူကွဲဆံပင်ပုံစံတွေကို select နိုင်သည်
Bang 2018 နှင့်အတူဆံပင်ပုံစံတွေ
အများဆုံးပုံမှန်အတိုင်းဆံပင်အမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်၏ Bang ၏အကူအညီနှင့်အတူအနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ : သူတို့ကဤသူမူကွဲများတွင်တင်ဆက်နီးပါးမည်သည့်အမျိုးသမီးဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံတွေ 2018 Bang ကိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်
သင်တစ်ဦးပြားနှင့်ဖြောင့်နှုနျးနိုငျပွီးပိုဖန်တီးမှုဂျဘေးတိုက်ကိုက်သို့မဟုတ်အချိုးမညီ combed ဖြစ်နိုင်၏,
တစ်ဦးကိုတိုဗားရှင်း 2018 အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ကလူတစ်ဦး၏တစ်ဦးပတ်ပတ်လည်အမျိုးအစားနှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်နှုနျးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး,
နောက်ထပ် option ကို - ထိုမြိတ်အများကြီးထွက်ရပ်များနှင့်ကြာမြင့်စွာကျစ်သောဆံပင်အတွက်ချောချောမွေ့မွေ့လှုံ့ဆျောမဟုတ်သည်အဘယ်မှာရှိ arcuate ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျစ် 2018 နှင့်အတူဆံပင်ပုံစံတွေ
ရှုပ်ထွေးများ၏အကူအညီဖြင့်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ 2018 ခုနှစ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဣတ္နှင့်ရင်ခုန်စရာအမျိုးသမီးဆံပင်ပုံစံတွေ။ ထိုသို့သောဒီဇိုင်းကွာခြားမှုကို select ဖြစ်နိုင်သည်:
ချောချောမွေ့မွေ့အမြီးသို့ဖြတ်သန်းသောတံတွေးထွေး။ ကျွန်တော်အကောင့်သို့ယူလျှင်ဖွတ်မြီးထိုး၏တစ်ခုလုံးကိုအရှည်အထက်ပိုင်းအတွက်, ဒါမှမဟုတ်အလယ်အထိသာထားရှိစေခြင်းငှါ,
တစ်ဦး pigtail သည့်လေဆာရောင်ခြည်နှင့်အတူ 2018 ခုနှစ်ဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံတွေသယ်ဆောင်ရန်တစ်နည်းနည်းခက်ခဲ။ သူမသည်ပြောင်းဖူး၏စကားကိုနားထောငျ၏ဂန္ဗားရှင်းကို အသုံးပြု. ထိပ်ကိုအောက်တွင် drags;
poluraspuschennye သူမ၏ဆံပင်ကျစ်ပုတီးနှင့်အတူအကြီးကြည့်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောနေရာချထားတခုရဲ့ဥပမာတစ်ခုရေတံခွန်ယက်နေသည်။
အထူးသဖြင့်မှတ်သားဖွယ် asymmetry ကိုအသုံးပြုသည်ဘယ်မှာ 2018 ခုနှစ်မိန်းမတို့အဘို့ခေတ်မှီဆံပင်ပုံစံတွေဖြစ်ကြသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့တွင်ဖော်ပြထားနိုင်ပါတယ်:
မကြာခဏထိုကဲ့သို့သော features တွေရှည်လျား Bang ကိုအသုံးပြုရသောတစ်ဦး "pixie", အသံအတိုးအကျယ်လည်ပင်းနှင့်ရေတိုနီးပါးရိတ်ဝီစကီရှိပါတယ်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဒြပ်စင်အသံအတိုးအကျယ်ဖန်တီး;
asymmetry stack နှင့်ပန်းချီထဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ကန့်သတ်ခြင်းငှါမကဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဒါဟာခေါင်းကိုမဆိုပိုငျးတှငျသုံးနိုငျ: ဦးခေါင်း၏ရှေ့, ဘေးထွက်သို့မဟုတ်နောက်ကျော။ မည်သို့ပင်အမျိုးအစားမရွေးရသေးပါကမယုံနိုင်လောက်အောင်စတိုင်နှင့်မူရင်းကြည့်ရှုမည်,
မသေချာသောတိုတောင်း Bob လည်း asymmetry ရှိစေခြင်းငှါ, စုံလင်တပ်ဆင်ခနှုနျးရန်မလိုအပ်သည်ရှိ၏,
ရိတ်ဘုရားကျောင်း 2018 နှင့်အတူဆံပင်ပုံစံတွေ
အတော်များများက stylist ရိတ် sideburns အသုံးပြု 2018 ၏ဆံပင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီ feature ကိုသင်ရိတ်ချွတ်၏အရွယ်အစားနှင့်အတူစမ်းသပ်နိုင်, လုံးဝမဆိုအရှည်ဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာပုံနှိပ်ပုံစံနှင့်အတူ, ကျဉ်းမြောင်းခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်။ အလှဆင်ပုရိတ်ဒေသများအပေါ်လျှောက်ထားသောတစ်ဦးခြားနားအရောင်ကစားနိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတာရှည်သို့မဟုတ်အတိုကောက် strands အပေါ်ကို run တဲ့ရိတ်ဗိမာနျတျောနှငျ့အမြိုးသမီးမြားအဘို့အဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံတွေ 2018 ဖြစ်လာသည်။ မြိတ်ရှိပါတယ်အသုံးပွုနိုငျဗိမာန်တော်နှင့်ရိတ်ဆံပင်အကြားချောမွေ့နှင့်ချွန်ထက်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်။
တစ်ဦးရောင်ခြည်၏ပုံစံကိုဖန်ဆင်း 2018 မှာသူတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုခေတ်မှီဆံပင်ပုံစံတွေ, မဆုံးရှုံးပါစေနဲ့။ သူတို့ကသူတို့နေ့စဉ်နှင့်ထွက်ပေါက်များအတွက်ပွဲလမ်းသဘင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီးသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ကြော့ရှင်းများ၏ပုံရိပ်ကိုပေးပါ။ အဆိုပါရောင်ခြည်ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်:
slick သို့မဟုတ်နှင့်အနောက်တိုင်းစုဆောင်းဆံပင်ဖြည့်။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌ဂန္ထဝင်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ကြည့်ရှုမည်, သို့သော်ဤရာသီ image ကိုတစ်ဦးအခြို့သောအရသာပေးခြင်း, အလငျးပျက်ကွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်ဌာန၏ဒုတိယဂျ, နှစ်သက်,
အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်ကျစ်ရောင်ခြည်နှင့်အတူအလွန်ပွဲလမ်းသဘင်ကြည့်။ ဒါဟာ ORGANIZATION ယက်ပုတီး, ကြီးမားတဲ့ပုလဲနှင့် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်, အလှဆင်ပန်းပွင့်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦးအလည်အပတ်ညနေပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်ပွဲလမ်းသဘင်ဖြစ်ရပ်များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်;
ကတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ဆရှိနိုင်ပါသည်။ ထူးခြားသောနှင့် flirty ကြည့်နှစ်ခုပတ်လည်ရောင်ခြည်မြင့်မားသောနှစ်ဖက်ရှိပြီး, သူတို့စကားကိုနားထောငျအဆငျ့မှာဘယ်မှာရှိလိမ့်မည်တစ်ဦးအနိမ့်ရှင်းလင်းရေး, ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့မိန်းမတို့အဘို့ 2018 အလွန်ရေပန်းစားမြင့်မားတဲ့ဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံတွေဖြစ်လာကြပါပြီ။ သင်သည်သူတို့၏ဒီဇိုင်းထိုသို့သောမူကွဲကို select နိုင်သည်
သည် "retro" စတိုင်မှသက်ဆိုင်ရာ positioned မြင့်မားသောရောင်ခြည်;
ထိပ်ပေါ်မှာ combed ponytail တစ်ဦးစတိုင်ဝဲအဖြစ်အမှုဆောင်အောက်ခြေမှာ strands ကြိုးရသော;
သံသောအဘို့ကို raveled ဖြစ်ပါတယ်နှင့်တကွ, ရောင်ခြည်ထိပ်မှာတည်ရှိပါတယ်သော, stacking ။
တစ်ဦးပွဲလမ်းသဘင်သို့မဟုတ်အခမ်းအနားဖြစ်ရပ်များ, သင်လှပသောညနပေိုငျးဆံပင်ပုံစံတွေ 2018 သူတို့တွင်ဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ဖန်တီးနိုင်သည်
"retro" စတိုင်ချောမွေ့လှိုင်းတံပိုး stacked;
ရင်ခုန်စရာထိတွေ့ element တွေကိုဒေါင်လိုက်စီစဉ်ပေးထားတဲ့လိမ် strands, တရံ add စုဝေး;
အမှန်တကယ်အလိုတော်နှင့် "ဟောလိဝုဒ်လှိုင်း" က "စတုရန်း" နှင့် "ခွံ" တွင်ပျမ်းမျှအလျားပေါ်သုံးနိုင်တယ်;
အလွန်ပေါ် မူတည်. နှင့်အနောက်တိုင်း stacked ဆံပင်ကောက်ကောက်ကြည့်ရှုမည်,
ညနေခင်းထွက်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်သင်သည်မည်သည့်ယက်လုပ်ခြင်းများအတွက်ရွေးချယ်မိလျှင်, တုနှိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ရှည်လျားသောအမြီးမြင့်မားသို့မဟုတ်အနိမ့်ရောင်ခြည်သို့မဟုတ်ပီပီသည်ဤဒြပ်စင်သို့ယက်ဆင်ဘက်ဘက်မှအထောက်အကူများလိမ်ယှက်ကျစ်နိုင်ပါတယ်။
Demi-ရာသီအင်္ကျီ - ဖက်ရှင် 2016
Dolce Gabbana နေကာမျက်မှန် 2015
တွင်း 2013 ခုနှစ်နှင့်အတူဂျင်းဘောင်းဘီ
ခြေကျင်းဖိနပ် - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း 2015
စတိုင်အမျိုးသမီးများနေ့ဂျာကင်အင်္ကျီ - ဆောင်းရာသီ 2015-2016
ပလက်ဖောင်းပေါ် Ash ကိုဖိနပ်
ရှည်သိုင်းကြိုးပေါ်မှာ clutch အိတ်
အဖြူရောင်နောက်ပြီး 2017 - ဖက်ရှင်စိတ်ကူးများ, ခေတ်ရေစီးကြောင်း, သတင်း, အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်
ဆော်ရဲလ် - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
Marzipan ၏ကိန်းဂဏန်းများ - မာစတာအတန်းအစား
ဆားရည်အိုင်များတွင်လျင်မြန်စွာဆားသခွားသီး - စာရွက်
ပြင်ပထုပ် Penoplex ၏ insulator တွင်လည်း
3 Monodiet 3